ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )
Maleရန်ကုန်မြို့Myanmar Like0members like this
ဘလော့များ (10)ဆွေးနွေးချက်များ (2)အဖွဲ့များ (1)ဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s Likes ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s Groups
GiveaGift အားလုံးကြည့်ရန်...
ရန်ကုန် စက်ဆန်း မီးဘေးကို သွားရောက် ကူညီ ပါ့မည် .....
♣တောသူမလေး♣ leftacomment for ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း…"Feb 24htin lin thar commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ပဌာန်းတရားတော် ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း ( စင်ကာပူနိုင်ငံ )'"thanks"Apr 2, 2012kolayko commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ပဌာန်းတရားတော် ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း ( စင်ကာပူနိုင်ငံ )'"သာဓု သာဓု သာဓု"Apr 1, 2012monlay commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ပဌာန်းတရားတော် ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း ( စင်ကာပူနိုင်ငံ )'"သာဓု..သာဓု.သာဓု"Apr 1, 2012ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ ) postedablog postပဌာန်းတရားတော် ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း ( စင်ကာပူနိုင်ငံ )ဒီနေ.ညနေ ၆ နာရီ မင်္ဂလ၀ိဟာရဗုဒဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပဋ္ဌာန်း ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေးရှိတာမို. ၊ရည်ရွယ်ချက်စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ဗုဓဘာသာဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့ ပဌာန်းတရားတော်ကို စနေနေ့တိုင်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ကြရန် .......သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ ။ဒီနေ.ညနေ ( ၆ ) နာရီ ပါ လိပ်စာ က( 30 , Jalan Eunos, Singapore 419495)ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းဦးမြင့်သိန်း ဖုံး ၈၁၅၉၃၉၈၉ မဖြူမွန်သန်. ဖုံး ၈၅၁၁၀၁၈၇ မမျိူးပပညွန်. ၉၇၃၀၁၆၆၀ကိုဇော်မျိူးမင်း ၈၂၆၁၉၅၈၁ပဌာန်းတရားတော် ပြန့်ပွားရေး အတွက် ကျွန်တော်တို့ တွေ အတူတူ…See MoreApr 1, 2012 3
ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ ) postedablog postမိုးရူးတိတ္ထိပရိဗိုဇ်တို့ထံမှ ထွက်ပြေးလာခဲ့သော ရှင်အာနန္ဒသည် ငိုကြီးချက်မနှင့် ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထား၏။“မြတ်စွာဘုရား . . . တပည့်တော်တို့ ပျက်စီးပါပြီဘုရား . . .။ တိတ္ထိပရိဗိုဇ်တွေဟာ တပည့်တော်တို့ ကျောင်းဝင်းကနေ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ အလောင်းကို တူးဖော်လိုက်ကြပါတယ် ဘုရား . . .။ အရှင်ဘုရားကိုရော တပည့်တော်တို့ ရဟန်းတွေကိုပါ တိတ္ထိတွေက စွပ်စွဲနေကြပါတယ် ဘုရား။ အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ မနေ့ညက တပည့်တော်တို့ဆီ တရားလာနာတယ်၊ တပည့်တော်တို့က သူ့ကို ဖမ်းချုပ်ပြီး ကျူးလွန်စော်ကားကြတယ်၊ သူသေတဲ့အထိ ပြစ်မိကျူးလွန်မိပြီး…See MoreFeb 16, 2012 0
ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ ) leftacomment for ကလေးတို.ဆရာမ"0832177609 my phone number if u can call me ......"Jan 26, 2012အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ရွှေည၀ါ ဆရာတော် .....'"ကျွန်တော်ကတော့ အမှန်တရားကို ပြောချင်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ပါ မြတ်စွားဘုရားကို အရမ်းကြည်ည်ုပါတယ် ညအိပ်ရင်လဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ငါးပါသီလကိုခံယူပြီးမှ ခင်ပွန်းကြိးဆယ်ပါးကို ကန်တော့ပြီးမှ အိပ်ပါတယ် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့…"Jan 23, 2012ပြည့်ဖြိုးသူ commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းပါစေ'"အင်မတန်ကိုမွန်မြတ်မှန်ကန်တဲ့စကားပါဘုရား၊လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်အရှင်ဘုရား။"Jan 14, 2012htoo ထူး commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းပါစေ'"ကျေးဇူးပါဘုရား ကြိုးစားဆဲပါဘုရား။။"Jan 13, 2012ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ ) postedablog postကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းပါစေ“ ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတဲ့ အနှစ်တစ်ပါး 'သီလ' ကို ရအောင်ယူပါ။ မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ အတွေးအကြံမှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ အဲဒီနေရာမှာ အတွက်လွဲတယ်။ကိုယ်ကျင့်တရား ဘာအရေးကြီးလဲကွာ။ စားရဖို့၊ နေရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သီလဆိုတာ ဘာအရေးကြီးလဲကွာ။စည်းစိမ်ခံစားဖို့ အရေးကြီးတယ်။သီလဆိုတာ ဘာအရေးကြီးလဲကွာ။ အများ…See MoreJan 11, 2012 2
win lwin soe liked ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'က မ္ဘာ ပျက်သည် အထိ ရှိနေမည့် ဘဏ်'Dec 30, 2011နီစံ (အနီ) liked ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ကမ္ဘုာလုံးဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အစည်းအဝေးပွဲကြီး'Dec 30, 2011Ma Aye Chan commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'ကမ္ဘုာလုံးဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အစည်းအဝေးပွဲကြီး'"အလွန်ပဲကြည်ညိုစရာ ကောင်းလှပါတယ်၊ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်..............."Dec 30, 2011monlay commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'က မ္ဘာ ပျက်သည် အထိ ရှိနေမည့် ဘဏ်'"အဖိုတန်တဲ့ဆုံးမစကာပါ"Dec 29, 2011အရှင်ဝိမလဝံသ commented on ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s blog post 'က မ္ဘာ ပျက်သည် အထိ ရှိနေမည့် ဘဏ်'"တပည့်တော်ဘလော့မှာ ကူးယူ တင်ခွင့်ပြုပါဘုရား။"Dec 28, 2011 More... RSS
ပဏ္ဍိဘာန ( ဗလ )'s Blog
ပဌာန်းတရားတော် ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း ( စင်ကာပူနိုင်ငံ )
ဒီဘလော့ကို April 1, 2012 တွင်1:52pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
ဒီနေ.ညနေ ၆ နာရီ မင်္ဂလ၀ိဟာရဗုဒဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပဋ္ဌာန်း ပူဇော်ပွဲ အစည်းအဝေးရှိတာမို. ၊
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ဗုဓဘာသာဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့ ပဌာန်းတရားတော်ကို စနေနေ့တိုင်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ကြရန် .......
သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ ။
ဒီနေ.ညနေ ( ၆ ) နာရီ ပါ လိပ်စာ က
( 30 , Jalan Eunos, Singapore 419495)
ဦးမြင့်သိန်း ဖုံး ၈၁၅၉၃၉၈၉ မဖြူမွန်သန်. ဖုံး ၈၅၁၁၀၁၈၇ မမျိူးပပညွန်.… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... မိုးရူး
ဒီဘလော့ကို February 16, 2012 တွင်10:52am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
တိတ္ထိပရိဗိုဇ်တို့ထံမှ ထွက်ပြေးလာခဲ့သော ရှင်အာနန္ဒသည် ငိုကြီးချက်မနှင့် ဘုရားရှင်ကို လျှောက်ထား၏။
“မြတ်စွာဘုရား . . . တပည့်တော်တို့ ပျက်စီးပါပြီဘုရား . . .။ တိတ္ထိပရိဗိုဇ်တွေဟာ တပည့်တော်တို့ ကျောင်းဝင်းကနေ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ အလောင်းကို တူးဖော်လိုက်ကြပါတယ် ဘုရား . . .။ အရှင်ဘုရားကိုရော တပည့်တော်တို့ ရဟန်းတွေကိုပါ တိတ္ထိတွေက စွပ်စွဲနေကြပါတယ် ဘုရား။ အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ မနေ့ညက တပည့်တော်တို့ဆီ တရားလာနာတယ်၊ တပည့်တော်တို့က သူ့ကို ဖမ်းချုပ်ပြီး ကျူးလွန်စော်ကားကြတယ်၊ သူသေတဲ့အထိ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းပါစေ
ဒီဘလော့ကို January 11, 2012 တွင်3:57pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments
“ ဘ၀ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတဲ့ အနှစ်တစ်ပါး 'သီလ' ကို ရအောင်ယူပါ။ မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ အတွေးအကြံမှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ အဲဒီနေရာမှာ အတွက်လွဲတယ်။
ကိုယ်ကျင့်တရား ဘာအရေးကြီးလဲကွာ။ စားရဖို့၊ နေရဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သီလဆိုတာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... က မ္ဘာ ပျက်သည် အထိ ရှိနေမည့် ဘဏ်
ဒီဘလော့ကို December 28, 2011 တွင်10:32am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။7Comments
အမေရိကန် ၊ အင်္ဂလန် ၊ ဆွတ်ဇာလန် စသော နိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များသည် အာမခံ မည်မျှပေးပေး က မ္ဘာပျက်ပါက အတူတူလိုက်ပျက်ရမည့် ဘဏ်များသာ ဖြစ်ပါသည် ။
ဒါန ဘဏ်တိုက်တွင် အပ်ထားသော ကုသိုလ်ဥစ္စာများကာ က မ္ဘာ ပျက်သောက်လည်း မပျက်ပေ ။
သံသရာတစ်လျှောက် ကုသိုလ်ပြုထားသူနောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ကောင်းကျိုးပေးနေမည်သာ ဖြစ်သည် .....
ကျွန်ုပ်သည် အသက် ၂၀ အရွယ် စာသင်သားဘ၀က… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (38 comments)
3:16pm အချိန်February 24, 2013, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည်
2:26pm အချိန်February 24, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
Friends18.com Happy Birthday Scraps 1:47pm အချိန်December 28, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ညီမ လာလည်ပါတယ် အစ်ကိုရေ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေရှင် 3:08pm အချိန်December 25, 2011, တွင်♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ♣☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺♣
♣☺☺ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ခရစ္စမတ် နေ့လေးမှာ ☺☺♣
♣☺☺ချစ်ခင်ရသော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံး ☺☺♣
♣☺☺ ယနေ့မှစ၍ မနက်ဖြန်တိုင်း နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းမှာ ☺☺♣
♣☺☺ ငြိမ်းချင်းခြင်းဟူသော လေဟာနယ်မှာ ☺☺♣
♣☺☺ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟူသော ပန်းလေးတွေကောက်လို့ ☺☺♣
♣☺☺ သောကအပူအပင်ဟူသမျှ မြူမူံမျှမကျန်ရှိပဲ ☺☺♣
♣☺☺ ကမ်းစပ်ပင်လယ်လို ထာဝရကင်းဝေးကာ ☺☺♣
♣☺☺ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံလို့ ☺☺♣
♣☺☺ မိမိဖြစ်ချင်သောဘ၀နှင့် ဆန္ဒထပ်တူကျပါစေလို့ ☺☺♣
♣☺☺ တောသူမလေးမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါသည် :)☺
9:52pm အချိန်December 6, 2011, တွင်မေဘုန်းခ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်လာပါတယ်ဘုရား 9:35pm အချိန်December 6, 2011, တွင်သာသနာ့မျိုးဆက် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရား ။ အရှင်ဘုရားလည်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေဘုရား။ 9:27pm အချိန်December 3, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Friends18.com Thank You Scraps
Friends18.com Thank You Scraps 6:01pm အချိန်December 2, 2011, တွင်ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ( သုံးသောင်း) ပို.ပြီးပါပြီ - ဆရာလေး နန္ဒစာရီကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်လို. ဆရာမလွှဲပေးလုက်တဲ့ဆီက သူ.ဘဏ်ထဲ
ထည့်ပေးလိုက်တာလေ- ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေနော် 5:45pm အချိန်December 2, 2011, တွင်ကိုမင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကိုလဲ အင်မတန်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိလို့ စာပြန်တာနောက်ကျသွားတာကိုလဲ ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ် 11:48pm အချိန်December 1, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကိုဗလရေ လာလည်သွားပါတယ် ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေ။
နေလင်းစိုး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything meemee shared မောင်မြင့်'s blog post on Facebookကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ26 minutes agoအမေ့ဂုဏ်ရည်ဆရာတော်လေး postedablog postဒါန၏ မျက်မှောက်အကျိုး (5)ပါးသစ္စာလေးတန် တရားမှန်ကို ဆရာမကူ သယမ္ဘူညာဏ်ဖြင့် မိမိအလိုလို ကိုယ်တော်တိုင် သိတော်မူခဲ့သော မြတ်…See More28 minutes ago 0
အမေ့ဂုဏ်ရည်ဆရာတော်လေး and San Min Htun are now friends1 hour agoဂီဂီ leftacomment for ဂီဂီ"ကိုကြီးကျေးတင်ပါတယ်ခုလိုဖိတ်ပေးတဲ့အတွက်ပါကိုကြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေနော်"3 hours agocapt, kyaw hsaung leftacomment for ဂီဂီ"ညီမလေးဂီဂီ...ညီမလေးကို...ကိုကြီးလာကြိုတယ်နော် ညီမလေးကဘာသာရေးလိုက်စားသူတစ်ယောက်မို့လို့…"3 hours agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post 'တောင်ဖီလာဆရာတော်၏ သီလဂုဏ်'4 hours agoဂီဂီ, ye latt, အားလုံးမင်္ဂလာပါ and2more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺4 hours agoHtain Lin Oo commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'တောင်ဖီလာဆရာတော်နှင့် စက်တော်ရာနှစ်ဆူ ရှာဖွေခြင်း'"သိရှိမှတ်သားကြည်ညို ရပါသည်။ တောင်ဖီလာဆရာတော်ကြီး ဘုရားဆုပန်ကြောင်းလည်းသိရ၍ သာဓုခေါ်ပါသည်၊…"5 hours agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post 'တောင်ဖီလာဆရာတော်နှင့် စက်တော်ရာနှစ်ဆူ ရှာဖွေခြင်း'5 hours agoHtain Lin Oo commented on မောင်မြင့်'s blog post '"မိဘကျေးဇူးအကျေဆပ်နည်း"'"ဆရာတော်ကို ဦးခိုက်ပူဖော်ပါတယ်။ ကူးယူမျှဝေပေးတဲ့ ဦးမောင်မြင့် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"5 hours agoHtain Lin Oo liked မောင်မြင့်'s blog post '"မိဘကျေးဇူးအကျေဆပ်နည်း"'5 hours agomun mun aung liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'သောတာပန် ကာမဂုဏ်ခံစားမှုနှင့် ပုထုဇဉ်တို့ ခံစားမှုဟာ အတူတူပဲ မဟုတ်လား'5 hours ago More... RSS